प्रताप: जीवनमा सबै कुरा यहाँ छ Martech Zone
प्रताप: जीवनमा सबै कुरा यहाँ छ
शनिबार, अप्रिल 21, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मेरो पहिलो प्रायोजित पोष्ट को लागी हो प्राप्ता, एक सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइटले नोट गर्दछ कि "जीवनमा सबै कुरा यहाँ छ!" तिनीहरू पनि दावी गर्न सक्षम हुन सक्ने पहिलो हुन सक्छन् "सोशल नेटवर्कि and र वेब २.० मा सबै यहाँ छ!" यी व्यक्तिहरू निश्चित रूपमा कामको लागि कडा थिए!
एक टेक्नोलोजी दृष्टिकोणबाट, पछाडि प्रविधि प्राप्ता केहि असाधारण छोटो छैन। साइट १००% अजाक्स हो। फोरमहरू, ब्लगहरू र अन्य गतिविधिहरू नेटवर्कमा जीवन अनुभव को वरपर केन्द्र। यो सोशल नेटवर्कि onमा साँच्चिकै राम्रो हो… बरु म भन्दा, म, म वा तपाईं, तपाईं, तपाईं, प्राप्ता "हामी" वरपर केन्द्रित छ। तिनीहरू सबै अनुप्रयोगको मा सबै जानकारी समूह अनुभवहरू.
म विश्वास लक्ष्य समूह को लागी प्राप्ता सम्भवतः युवा वयस्कहरू हुन् (म तलको Absinthe छलफल जस्तै अनुभवहरूको मजा लिन धेरै बुढो हुँ! :)।
त्यहाँ एक धेरै शक्तिशाली खोज इञ्जिन पनि छ जुन प्रतिस्पर्धा गर्छ कुनै पनि अनलाइन डेटि service सेवा। अनलाइन डेटि Imaको कल्पना गर्नुहोस् यदि यससँग ब्लगहरू, छलफलहरू, जीवन अनुभवहरू, द्रुत सन्देश, विजेटहरू र अनलाइन च्याट छन् (च्याट चाँडै आउँदैछ) र तपाईंसँग प्राप्ता! यदि मैले एक अनलाइन डेटि service सेवा चलाएको छु भने, म इमानदारीताका साथ मेरो बुटहरूमा यस जस्तो समाधानमा हल्लाउँदै छु।
एक समीक्षा मा सबै गुलाबी हुन सक्दैन, यद्यपि, सही? यद्यपि एप्लिकेसन कुनै त्रुटि बिना नै चल्‍यो (यसले वास्तवमै गर्‍यो - मलाई कुनै समस्या थिएन), मलाई लाग्छ कि अनुप्रयोगको सौंदर्यशास्त्रमा सुधारको ठूलो अवसर छ। IMHO, वेब २.० एजेक्स ईन्टरफेसको बारेमा मात्र होईन, यो सरलता र प्रयोगको सहजताको बारेमा पनि हो।
का लागि लोगो प्राप्ता अस्पष्ट र यूनि-आयामी हो। लोगो ठाडो पनि छ जबकि इन्टरफेस प्राय: तेर्सो हो त्यसैले यो ठाउँको बाहिर देखा पर्दछ। स्क्रिनमा सबै कुरा मोनो-टोन हो, कुनै आयामहरू, ढाँचा, र छायाँ छैन। मैले महसुस गरें कि यसको केही अंश पृष्ठ अनुकूलन गर्ने क्षमताको कारणले हो तर यसले एप्लिकेसनलाई थोरै फ्ल्याटमा छोडिन्छ (शून्य अभिप्रायले)।
म हालको अनुकूलन विकल्पको सट्टा एक मजबूत तीस्फेसिंग इन्टरफेसलाई सल्लाह दिन्छु ... मानिसहरूलाई फन्ट, फन्ट-साइज र पृष्ठ र thanको सट्टा गतिशील रूपमा सबै परिवर्तन गर्न अनुमति दिनुहोस्। वेब २.० आफैंलाई अभिव्यक्त गर्ने बारेमा हो - यही अन्य सामाजिक नेटवर्कहरूलाई धेरै लोकप्रिय बनाउँदछ। साथै, केहि कम्पोनेन्ट प्लेसमेन्ट भीडले भरिएको छ र क्रस ब्राउजर होइन। उदाहरण को लागी फन्ट र रंग अनुकूलन मेरो लागी सही प्रस्तुत छैन:
त्योले भन्यो, मैले दिनु पर्छ प्राप्ता एप्लिकेसनको क्षमता दिईएको सम्भवत सबै भन्दा बढी ग्रेडहरू र एस्थेटिक्स छैन। यो अद्भुत उपक्रम हो र विकासकर्ताहरू ठूलो क्रेडिटको योग्य छन्! वेब अनुप्रयोगहरूको साथ अनुभवी एक महान ग्राफिक कलाकारमा लगानीले यस अनुप्रयोगलाई मुख्यधार र लोकप्रियमा ड्राइभ गर्दछ। म इमान्दारीपूर्वक सोच्दछु कि यो एक मात्र कारण हो जसको कारण मैले सुनेको छैन प्राप्ता पहिले!
एउटा अन्तिम सल्लाह: समाधानलाई एजेक्स वा वेब २.० को रूपमा प्रचार गर्न आवश्यक छैन। व्यक्ति यी कारणहरूको लागि तपाईंको अनुप्रयोग प्रयोग गर्न गइरहेका छैनन्। यो के हो साइटको लागि पदोन्नति गर्नुहोस् - अनुभव साझा गर्न, तिनीहरूको बारेमा छलफल गर्न, र अरूलाई फेला पार्ने राम्रो ठाउँ!
तपाईंको अनुप्रयोग (Del.icio.us र टेक्नोराटी) बढाउनको लागि एपीआईहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्
टेक्नोराटी रैंक वर्डप्रेस प्लगइन संस्करण २.०..2.0.4 रिलिज गरियो